L'Oreal Paris Men Hydra Energetic Multi Action 8 Serum Foam - 150ml | Buy online | SHOP.COM.MM
L'Oreal Paris Men Hydra Energetic Multi Action 8 Serum Foam - 150ml
အလုပ်ကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သူများ ကို အားအင်ပြည့်ဝ၍ လန်းဆန်းစေနိုင်သည်။
ရေဓာတ်ဖြည့်၍ အညစ်အကြေးများ အားလုံး သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းသုံးပေမယ့် အကျိုးရလဒ်က ၈ခုတောင်ရစေတာမို့ အရမ်းကိုတန်တဲ့ serum foam လေးပါ။အရမ်းအရမ်းကိုကောင်းလို့ ဝယ်ကြပါလို့ Read more Hide
Men Hydra Energetic Multi Action 8 Serum Foam gives anti tiredness with 24H hydration. Caffeine and Vitamin C is specifically designed for tired skin. It acts likeasource of energy for the skin to fight signs of tiredness from morning till night.
Men Hydra Energetic Multi Action 8 Serum Foam - 150ml
Specifications of Men Hydra Energetic Multi Action 8 Serum Foam - 150ml